जापानमा अनेक तालका नेपाली (जापान अनुभव) - Nepal News Post::Nepal News Post, online news portal
धेरै समय देखि आफ्नो अध्ययन को क्रममा भूमिगत भएको कारण आजभोलि धेरै साथीहरु सँगको भेटघाट निकै पातलो भएको छ। कहिले काँही फोन मा कुरा हुन्छ। तर आज बिहान मेरो फोन कल मा तीनओटा मिस कल देखायो खोलेर हेरे नचिनेको नम्बर रहेछ।
म खासै नचिनेको नम्बर मा कल ब्याक गर्दैन।चौथो पटक फेरी त्यही नम्बर बाट फोन आयो उठाए। एकजना विद्यार्थी भाई रहेछन।मेरो कुनै साथीबाट नम्बर पाएर तपाईंलाई फोन गरेको भन्दै थिए।
भाई को समस्या २०२०मार्च बाट स्कुल सकिने भएको ले कामको खोजीमा रहेछन। मैले के सहयोग गर्न सक्छु भाई भनेर सोधे!
दाई स्कुल सकिन लाग्यो , अब काम खोजेर भिसा चेन्ज गर्नु पर्यो! दाईले केही आइडिया दिनुहोस न भने।
भाई लाई महिले सबै भन्दा पहिला आफ्नो स्कूलको रोजगार सपोर्ट सेन्टर मा सम्पर्क गर्न भने , धेरै जस्तो स्कूल मा यस्तो सेन्टर हुन्छ र त्यसले आफ्ना विद्यार्थी हरुको स्कूल सके पछि रोजगार खोज्न को लागि सपोर्ट गर्ने गर्दछ।
भाइले दाई हाम्रो स्कुल ले त केही सपोर्ट गर्दैन भने! अनि महिले भाई लाई त्यसो हो भने जापान मा माई नावि, रीकु नावी तथा अन्य रोजगार काउन्सिलिङ गर्ने संस्थाहरु मा अनलाइन बाट नाम दर्ता गरी कम्पनी हरु खोज्ने तरिकाको बारेमा बताए।
भाइले यो तरिका अलि गार्हो माने! दाई भाषा अलि कमजोर छ भने। भाई धेरै चिन्ता गर्नु पर्दैन, एकदिन फुर्सद मिलाए भेट , म तिमीलाई अनलाइन रजिष्ट्रेशन गर्ने अनि बायोडाटा बनाउने तरिका सिकाइ दिन्छु नि त भने!
भाई यसमा अलि अरूचिकर देखिए, अनि महिले यदि यो तरिका अलि अप्ठ्यारो लाग्छ भने, तिम्रो सिटी नजिक को हेल्लो वर्क मा जाउ, त्या विदेशी लाई पढाइ पछि काम खोज्नको लागि सपोर्ट सेन्टर हुन्छ, त्यसरी पनि काम खोज्न सकिन्छ भनेर मैले जानेका र बुझेका सबै आइडिया हरुको बेलीबिस्तार लगाए।
भाई यी सबै कुरा हरुमा खासै रुचि नभएको जस्तो लाग्यो। अनि मैले सोधें, यी मध्ये कुन तरिकाले अगाडि जान्छौ अब भनेर?
दाई यी सबै तरिका त मलाई थाहा थियो, म त दाईले बंगाली, श्रीलंकन अथवा कुनै ओकील को नम्बर दिनु हुन्छकी भनेर हजुरलाई फोन गरेको!पैसा दियो भिसा निकाल्यो, यति धेरै मिहिनेत किन गर्नु पर्यो!
यो उत्तर सुने पछि , मेरो अरु भन्नु र सिकाउनु केही बाँकी रहेन। वेस्ट अफ लक, 頑張って下さい भनेर फोन काटिदिए …
( लेखक,१ दशक बढि समयदेखि जापानमा हुनुहुन्छ, हाल स्वास्थ्य पर्यटन विषयमा विद्यावारिधी सोध गरिरहनुभएको छ )